50L Electric Brewhouse-Izindaba-Ningbo COFF Machinery Co., ltd
50L Brewhouse kagesi
Isikhathi: 2020-12-02 Amazwana: 17
Ngenxa yobhadane, uhlelo lwe-nano brew luthandwa kakhulu phakathi kwabathandi bophuzo lwasekhaya. Ukuhlangabezana nezidingo zemakethe, i-COFF iphusha uchungechunge lohlelo lokuphuza ekhaya. Manje ake sibethule ngamunye ngamunye.
Ihlanganiswe yi-tun-lauter tun, kettle, CLT, 3X50L Unitank
Izici: I-Skid-mounted, ipulaki nokudlala, ukubukeka okuhle, okungabizi kakhulu, ukukhetha okungcono kakhulu kokuphuza kwasekhaya;
Isistimu yokubilisa ifakwe into kagesi, i-straining basket, i-RTD-PT100 tem-sensor, i-tube level ye-liquid, amapayipi we-sanus we-SUS nama-valve, ipompo (i-VFD ongayikhetha), i-Heat exchanger enedivayisi ye-wort aeration, iphaneli yokulawula.
Uhlelo lokubilisa lubandakanya: i-3x50L unitank, i-RTD-PT100 tem-sensor, i-hops port, i-CIP, i-gauge yengcindezi, i-valve yesampuli, ingalo yokubhaka, i-port yokukhipha, i-valve yokuphepha, induku ye-carbonation kanye nama-valve we-SUS njll.
Iningi lobuciko bokwenza ubhiya buqala ibhizinisi labo kusuka kuzinhlelo ze-nano. I-COFF inikezelwe ekuhlinzekeni isisombululo esiphelele sokwakha kusuka ekwakhiweni, ekwenziweni, ekufakweni kusevisi yangemva kokuthengisa. Nge-COFF, uqinisekile ukukhuphula inani lakho.
Ngeminye imininingwane, pls thintana jessie@nbcoff.com
Previous: 1BBL ~ 3BBL Direct Fire Brewhouse
Okulandelayo: I-Paking & Shipping 6000L ithangi lokuthambisa